အဆိုပါ6သြစတြီးယားဟင်းကြိုးစားပါရှိရမည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဆိုပါ6သြစတြီးယားဟင်းကြိုးစားပါရှိရမည်
အဆိုပါ6သြစတြီးယားဟင်းကြိုးစားပါရှိရမည်
အားဖြင့် အဲလစ်ဇဘက် Kawamura
ဤရွေ့ကားအစဉ်အမြဲငါပျော်မွေ့ကြပါပြီအကောင်းဆုံးကိုဒေသခံဟင်းလျာများအပေါ်မှာငါ့ရှင်ကြီးတွေဟာ, ငါ၏အနေစဉ်အတွင်း သြစတြီးယားနေ. ငါရှိခဲ့သည် နွေရာသီ 2016 သေးငယ်တဲ့အရွယ်ဒေသခံ NGO မှာအကြှနျုပျ၏ 4-တစ်လအလုပ်သင်များအတွက်. အဆိုပါအလုပ်သင်အတွေ့အကြုံကဒါကြီး, ငါပါရမီနုပျိုတစ်ဦးချင်းစီဖြည့်ဆည်းဖို့တယ်, ယခုတွင်ငါသည်အထိအတူထိတွေ့ထားတော်မူသော, ငါစင်္ကာပူ၌ငါ့လက်ရှိအခန်းကဏ္ဍ၌ငါ့အလုပ်သင်၌ဆုံးမဩဝါဒကျွမ်းကျင်မှုအကောင်အထည်မဖော်နိုင်ပါပြီ.
အစားအစာသြစတြီးယားတှငျလညျးကောငျး. ငါ့ကိုကြောင့်မြင့်မားတဲ့ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်မှစင်္ကာပူတွင်သြစတြီးယား၏အရသာကိုပုံတူပွားဖို့အတှကျမလှယျကူနေချိန်မှာ (ဒီမှာ, အစားအစာအများစုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ကနေတင်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်, စင်္ကာပူကြောင့်သူ့ရဲ့သေးငယ်တဲ့မြေယာအရွယ်အစားအလွန်အနည်းငယ်သာထုတ်လုပ်အဖြစ်), တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကပဲစင်္ကာပူ၌ငါ့ hectic နေ့စဉ်အသက်တာ၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်အဟောင်းကိုသြစတြီးယားရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုထပ်ခါထပ်ခါကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်. သူများသည်ကောင်းသောအမှတ်ရစရာအကြှနျုပျ၏စိတျထဲတှငျနေဆဲလတ်ဆတ်ဖြစ်ကြသည်.
ညာတိကျသောအစားအစာနှင့်ပေါ်မှာငါ၏အပုံပြင်များသို့ခုန်ခင်မှာ, ငါအစားအစာ၏ backstory တစ်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်. အဆိုပါ Habsburg အင်ပါယာတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဒေသအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်း (ယခုပစ္စုပ္ပန်ရက်ကြာအီတလီ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဆလိုဗက်ကီး, ရိုမေးနီးယား, ယူကရိန်း, ပိုလန်, ဆလိုဗေးနီး, ခရိုအေးရှား, နှင့်ဘော့စနီးယား) ဥရောပမှာ, ခေတ်သစ်သြစတြီးယားအစားအစာရှိပါတယ် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီး အင်ပါယာ၏ယခင်အစိတ်အပိုင်းများမှဒေသခံသြစတြီးယား '' အကြိုက်ဖို့တင်သွင်းဟင်းလျာများဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီ. ငါသည်သင်တို့ကိုဟင်းလျာများ၏ဤ kaleidoscope ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်သြစတြီးယား၌ငါ့အချိန်ကာလအတွင်းသူတို့ကိုငါသည်အစာစားရန်အသုံးပြုလမ်းကိုကြုံနေရပါလိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်.
Kasespatzle (အရည်ပျော်မှုဒိန်ခဲနှင့်အတူတန်ဆာများကို ပြင်. အိမ်လုပ်သြစတြီးယားခေါက်ဆွဲ)
ဒီဟင်းလျာများရဲ့ဇာစ်မြစ်ကိုအလွန်အမင်းငြင်းခုံဖွယ်ရှိသည် - အချို့ကမူယင်းသည်ဆွာဘီးယန်းဒေသမှဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်, တချို့အခြားသူတွေ Kasespatzle ၏ရှေးအကျဆုံးစံချိန်အစောပိုင်း 17 ရာစုအတွင်းလက်-တိကျမ်းစာ၌လာသည်ချက်ပြုတ်သည့်စာအုပ်ပြန်ရက်စွဲပါကြောင်းဖော်ပြ. နာမတော်သည်ကိုက်အရွယ်အပိုင်းအစသို့မုန့်စိမ်း kneading လှုပ်ရှားမှုကနေလာကြပြီစေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့်အဘယ်သူမျှမသမိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားလည်းမရှိ. ခေတ်သစ်ကာလ၌, ဒီပန်းကန်တစ်ဘို့လူသိများသည် နှစ်သိမ့်အစားအစာ တစ်ဦးပြီးနောက် ရှည်လျားသောတိုးမြှင့် အဆိုပါပြတ်သား Alpine သောလေထုထဲတွင်. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, သငျသညျအများဆုံးဒေသခံစားသောက်ဆိုင်ထဲမှာရှာတှေ့နိုငျ. ဂျာမန်စကားပြောနိုင်ငံတွေအများအပြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အဆိုပါ Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg သြစတြီးယား၏အနောက်၌တည်ရှိ၏) သြစတြီးယားအတွက်အလွန်အမင်းရေပန်းစားသည်. အဆိုပါခေါက်ဆွဲမုန့်ညက်ထံမှဖန်ဆင်းထားသည်, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မူလအစမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, ကင်ဒိန်ခဲထဲ၌မြုပ်လျက်ရှိသေးငယ်တဲ့အကိုက်သို့ပြီးဆုံး. အဆိုပါ texture အမှန်တကယ်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖြစ်ပါသည်, ခံတွင်းထဲမှာအရည်ပျော်. ကြော်ကြက်သွန်နီနှင့်နွေဦးကြက်သွန်နီဒီ creamy ကောငျးကငျဘုံပန်းကန်မှနံ့သာမျိုးကို add (သူတို့ကတကယ်တော့အလွန်ကြီးစွာသောအလုပ်အကိုင်အလုပျ!).
နောက်ကျောသြစတြီးယားမှငါ့ကိုမယူပါ - ငါ Candy အင်ပါယာဆိုင်များတွင်၌ဤရှာတွေ့သည့်အခါတိုင်းအစဉ်မပြတ်ငါကြွေးကြော် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ confectioneries များအတွက်စင်္ကာပူရဲ့ဦးဆောင်တင်သွင်း, ဒီငါထုံးစံထုတ်ကုန်ယ်ယူနိုင်ပါသည်တစ်ခုတည်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်). ထုံးစံ 19 ရာစုနှောင်းပိုင်းအတွင်းစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အစဉ်အလာသြစတြီးယားမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်. တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလက်နက်ပါ, ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသည့်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အထင်ကရ pinkish packages များ, ဒီအမှတ်တံဆိပ်သြစတြီးယားအတွက်လက်မှတ်အမှတ်တရပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းများအတွက် famed ဖြစ်ပါတယ်. Mannerschnitten (hazelnuts ချောကလက်န့်ကိုတစ်ဦး packet ကို) မဖြစ်မနေကြိုးစားရမည်; ဒါကြောင့်ချိုမြိန်မဟုတ်သလိုဤမျှအရသာမရှိသောမဟုတ်, ဤအမှုသည်ငါ့ချိုမြိန်သွားအထင်ကြီးရန်ပျက်ကွက်ဟန်ကိုဘယ်တော့မှ. အဆိုပါ hazelnuts အမြဲဗီယင်နာ၌ငါ့တောက်ပရက်ငါ့ကိုပြန်သယ်ယူပို့ဆောင်. အခုအချိန်မှာငါက Manner ချောကလက်ကန့်များကိုရေခဲမုန့်စားသောက်ဖို့ငါအမြဲတမ်းကြိုးစားနေတယ်. ထုံးစံသာဗဟိုဥရောပမှာရှိတဲ့စျေးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်ကြောင်းကိုငါထင်ခဲ့ကြ. သို့သျောလညျး, ငါ Mannar အဖြစ်သိသာတာမှားဖြစ်ကြောင်းကို သကြားလုံးရရှိနိုင်ပါသည် စင်္ကာပူလွန်း.
Schlutzkrapfen (Ricotta ဒိန်ခဲနှင့်ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်ပြည့်စုံလဝက်ခေါက်ဆွဲ)
ငါကဒီလူသိများတဲ့အနောက်တိုင်းသြစတြီးယား, Innsbruck ကိုစူးစမ်းလေ့လာတဲ့အခါငါဒီပန်းကန်ကိုကြုံခဲ့ရတယ် မှတ်တိုင်, ရွှေခေါင်မိုး. ငါကဖီးသို့ hopped နှင့်သက်သတ်လွတ်တစ်ခုခုရှာဖွေနေခဲ့သည်. မီနူးတက် Reading, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြည့်အတူခေါက်ဆွဲငါ့အဘို့ကောင်းတဲ့တံပိုးမှုတ်သောအခါ, ဒါကြောင့်ငါကအမိန့်ထုတ်. ငါကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူရှည်လျားသောခေါက်ဆွဲများ၏စဉ်းစားခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုကအထဲမှာတစ်ခုခုနှင့်အတူခေါက်ဆွဲပြားခဲ့၏ဖျန်းနှင့်ပြည့်စုံခဲ့ကွောငျးထွက်လှည့် ဒိန်ခဲ နှင့်ကုန်တယ်နွေဦးကြက်သွန်နီ. အဆိုပါအရည်ကျိုထောပတ်ငါ့နှုတ်၌ဤပန်းကန်ချောအောင်တစ်တန်အလုပ်လုပ်ခဲ့. ပို. အရေးကြီးသည်, ကောင်းသည်ဆိုပါကကျွန်မဆဲစားပွဲထိုးငါ့စားပွဲလာမယ့်နှင့်မေးမြန်းခြင်းသတိရ. ငါကဒါကြောင့်အရသာရှိတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်သူမ၏ပြောသည် - ငါဒါဖောက်သည် '' စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏ဂရုစိုက်ခြင်းဖြင့်ထိမိခဲ့သည်နှင့်ငါ့နှလုံးနွေးထွေးမှုနှင့်ပြည့်စုံလေ၏. တောင် Tirol တခုမှ (ယခုအီတလီ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသ), ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာအိမ်နီးချင်း Tirol အတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဘုံအစားအစာရဲ့. အလုပ်သမားတစ်ဦးကကြီးမားသောငွေပမာဏကလုပ်နိုင်အောင်လွယ်ကူသောကြည့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိနေသော်လည်းဒီစေရန်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်.
Sachertorte (အဆိုပါ apricot ယိုအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူတစ်ခါးသောချောကလက်ကိတ်မုန့်)
ဗီယင်နာရှိ“ မဖြစ်မနေစားရမည်” တစ်ခုဖြစ်သည်, သြစတြီးယား. ဒါဟာ Habsburg ကာလရဲ့အဆုံးမှာ created အမှန်တကယ်ဒေသခံအထူးဖြစ်ပါသည်. သင်ဤကိတ်မုန့်နောက်ကွယ်တွင်တစ်ဦးစိတ်ပျက်ဖွယ်ပေမယ်အရေးကြီးသောရန်ပွဲရှိကွောငျးကိုသိခဲ့ပါ? နှစ်ခု Viennese pastry ကုမ္ပဏီကြီးများ, Demel နှင့် Sacher ပင်ရယ်စရာတရားရုံးတွင်အမှုဆောင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာက "ချိုမြိန်" စစ်ပွဲပြည်နယ်အတွင်းရှိခဲ့; သူ "မူရင်း Sachertorte" သူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်သင့်တယ်? ဘယ်လောက် apricot ဖို့အသုံးပြုရပါမည် ကိတ်မုန့်စုံလင်? များအတွက်သင့်လျော်သောအပူချိန်ကဘာလဲ အရည်ချောကလက်? အလေးအနက်ထား, သူတို့ကပြည်နယ်တရားရုံးတှငျဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုစောဒကတက်ခဲ့ကြ, ချက်ပြုတ်လူတန်းစားအတွက်ဒါမှမဟုတ်မျိုးမဆိုမရ. အဆုံးမှာ, Sacher စစ်တိုက်ရာတွင်အနိုင်ရနှင့်ယခုဖြစ်ခြင်းအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကို prides "တစ်ခုမူရင်း Sacher တရားမျှတမှုမရှိခြင်း။ " သမိုင်းအပြင်, က Sacher ၏ထက်ပိုပြီးချိုမြိန်ခြင်းနှင့် fluffy ဖြစ်ပါတယ်သကဲ့သို့ငါကိုယျတိုငျ Demel တဦးတည်းပိုမိုနှစ်သက်. Sacher အကြားခြားနားချက် "Sacher တရားမျှတမှုမရှိခြင်း" နှင့် Demel အဆွေတော်ကဘာလဲ? ယခင်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားဈေးနှုန်းနှင့်ပိုပြီးကိတ်မုန့်အလွှာတယ်နှင့်ကိတ်မုန့်အတွင်းပိုင်း apricot တိုးလာ. အဆုံးစွန်သောနည်းနည်းစျေးသက်သက်သာသာနဲ့အများကြီး creamier ဖြစ်ပါသည်.
Salzburg ရထားမှ Frankfurt
Salzburg ရထားမှ Cologne
Salzburg ရထားမှ Dresden
ဗီယင်နာရဲ့နာမည်ကျော်တစ်ကိုယ်စားလှယ်. ဗီယင်နာအတွက်, နီးပါးလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလာမယ့် '' ပါဝင်ပစ္စည်းများ "ထူးခြားဆန်းပြား" ရောင်းစျေးကွက်၏ဝန်ရှိပါတယ်. သငျသညျအစားအစာများနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ရုရှားက, ကြက်ဆင်, ဂျပန်, အိန္ဒိယ, နှင့်ပိုပြီး. မူလကအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေ, ဒီနိုင်ငံတကာစျေးကွက်မှာတွေ့ရှိ Viennese လက်ညှိုးကိုအစားအစာရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. mashed ကုလားပဲကနေဖန်ဆင်းတော်, အဆိုပါ Falafel ဘောလုံးမုန့် flattening နှင့်အတူ Falafel ကိစ္စ္စသို့မဟုတ်ပူးတှဲ၏ပုံစံ၌စားနိုင်ပါတယ်. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, Falafel ဖြတ်တစည်းနှင့်တကွကြွလာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ဒိန်ချဉ် မြေတပြင်လုံး oat ထုပ်ပိုးပြီးသို့မဟုတ် pita မုန့်အတွင်းအပြင်. စုံလင်သောသက်သတ်လွတ်အဓိကဖြစ်ခြင်း, ဒီငါသည်သူတို့မသာသက်သတ်လွတ်အဖြစ်အစားအစာရွေးချယ်မှုကန့်သတ်ထားကြသိတယ်သကဲ့သို့ငါ၏အဆွေခင်ပွန်းတို့သည်ငါ့ကိုပူဇော်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ပန်းကန်ဖြစ်ပါသည်. အားလုံးဗီယင်နာကျော် Falafel ငျးကု၏တစ်တန်ရှိပါတယ်, သော်လည်းငါ့အကြိုက်ဆုံး Falafel ရပ်တည်ချက် Brunnenmarkt အတွက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. လူတိုင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နိမ့်စျေးနှုန်းများမှာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်ခင်းကျင်းရနိုင်တဲ့အရူးစျေးပေါစျေးကွက်အဖြစ်လူသိများ, ဒီစျေးကွက်လည်းအမေရိကန်ဒေါ်လာထက်လျော့နည်းကုန်ကျကြောင်း Falafel ထုပ်ပိုးပြီးတစ်ဦးသောအဘို့ကိုကမ်းလှမ်း 1 သို့မဟုတ်ဒါ, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းမြို့မှာစျေးအသက်သာဆုံးအောင်. ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, အဆိုပါထုပ်ပိုး၏အရသာအခြားမည်သည့်ဗီယင်နာစျေးကွက်အတွက်ကဲ့သို့ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်.
အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးသြစတြီးယားအချိုပွဲ! ဂျုံမှုန့်နှင့်ပန်းသီးတစ်ခွက်နှင့်စပျစ်သီးပျဉ်တစ်ခွက်သည်မှော်အတတ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကင်သို့ခံစားရစေသည်. အဆိုပါဒဏ္ဍာရီသြစတြီးယားအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနေချိုမြိန် Baklava အချိုပွဲတင်သွင်းကြောင့်ရှိပါတယ်. Baklava fluffy pastry နှင့်သကြားနဲ့ရည်၏ဖန်ဆင်းထားသည်, ကရည်အတွက် pastry နစ်မြုပ်ရဲ့အဓိပ်ပာယျ. တစ်ဦးထက်ပို fruity ဘက်မှာဖြစ်ခြင်း, Apfelstrudel ဒီသြစတြီးယားဟင်းလျာများ၏စံနမူနာကောငျး Baklava- တစ်ဒေသတွင်းဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်, သူတို့ကိုအများကြီးသူတို့မှတင်သွင်းခဲ့သောယခင်သြစတြီးယားအင်ပါယာဒေသကနေသဲလွန်စကိုခြေရာခံနိုင်ပါတယ်အဖြစ်. မရေမတွက်နိုင်သော Apfelstrudel ချက်ပြုတ်နည်းများအွန်လိုင်းရှိပါတယ်, နှင့်စာရွက်စာရေးဆရာများအချို့ဟာသူတို့ရဲ့ share ဖို့လုံလောက်တဲ့ရက်ရက်ရောရောများမှာ မိသားစု ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ. သို့သျောလညျး, အဆိုပါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုကိုမုန့်စိမ်းကတော့ pastry စားဖိုမှူးကတဆင့်သတင်းစာကိုဖတ်ရှုနိုင်အောင်ပါးလွှာဖြစ်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
စာရေးသူအကြောင်း: မားမီအကြောင်းကိုများအတွက်စင်္ကာပူအချိန်ပြည့်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်2နှစ်ပေါင်း. သူမသည်ကျယ်ကျယ်ကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုခရီးထွက်ခြင်းနှင့်လုံးဝသူမတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးထားပါတယ်နေရာအသစ်ရှာဖွေစူးစမ်းချစ်သောသူထားပါတယ်. အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ခရီးသွားလာမဟုတ်ပေမယ့်, သူမတစ်ဦးနဂါးလှေအားကစားကစားခြင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ယူခြင်းသူမ၏အခမဲ့အချိန်နှမြောရ.
သငျသညျသြစတြီးယားစူးစမ်းနှင့်၎င်း၏အစားအစာပျော်မွေ့ပျော်မွေ့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အကောင်းဆုံးကိုက်ဘ်ဆိုက်မှ အမိန့်လက်မှတ်များလေ့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဖြစ်ပါသည်
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသားယူနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ့်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူခရက်ဒစ်ပေး ဤ blog post မှ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F6-must-try-austrian-dishes%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ကဗျာ #သြစတြီးယားအစားအစာများ #ကဗျာ #graz အစားသောင်းကြမ်းသူ travelaustria
ကျွန်ုပ်သည်အတွေ့အကြုံများစွာသင်ကြားခြင်းနှင့်ဘာသာစကားများသင်ယူခြင်းအပြင်နိုင်ငံတကာရောင်းအားတွင်အလုပ်လုပ်သောအလွတ်ဘလော့ဂါတစ်ယောက်ပါ. သူမရဲ့အရေးအသားစတိုင်သည်သူမ၏အတွင်းအကြံပေးချက်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည် +30 နိုင်ငံများနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သား, သူမကယုံကြည်သည်စာဖတ်သူများရှာဖွေနေကြသည်တစ်ခုခုပါပဲ - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ